မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်(အိုးဘိုထောင်)တွင်စာရေးဆရာသုံးဦးစာပေဟောပြော - Yangon Media Group
အကျဉ်းဦးစီးဋ္ဌာန မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင်(အိုးဘိုထောင်)တွင် မေ ၂၆ရက်နေ့က အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့်မန္တလေးစာရေးဆရာသုံးဦးစာပေဟောပြောကြကြောင်းသိရသည်။
စာပေဟောပြောပွဲကိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ မောင်းထောင်ခန်းမတွင် နေ့ ၁၂နာရီအချိန်မှစတင်ကျင်းပရာ ကဗျာဆရာထွန်းသွေးအိမ်က လူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်ရေး၊စာရေးဆရာသိုက်ထွန်းသက်က ဆွေမျိုးများထံအလည်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆရာဦးဘုန်း(ဓါတု)က ဌက်ကလေးရဲ့မနက်ဖန် ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ဟောပြောကြသည်။
ဟောပြောပွဲအပြီးတွင်ဆရာဦးဘုန်း(ဓာတု)က သုတရသစာအုပ်များနှင့်အဝတ်အထည်များပေးအပ်လှူ ဒါန်းရာ မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ထောင်ပိုင်ကြီး) ဦးချိုဝင်းမောင်က လက်ခံရယူပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကာစာရေးဆရာများအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်သည်။
အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ရေး စာပေဟာပြောပွဲကိုအကျဉ်းဦးစီးဋ္ဌာန မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်၏စီစဉ်မှုဖြင့်ကျင်းပရာ အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ ၅၀၀ကျော်တက်ရောက်နားထောင်ကြသည်။မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းကျနေသူများရှိရာ ၎င်းတို၏အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲရေး စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာများကစာပေဖြင့်အသိပညာပေးဟောပြောကြခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင် အစိုးရသစ်လက်ထက်၌အကျဉ်းကျကျောင်းသားကျောင်းသူများအား အတန်းကျောင်းပညာများသင်ကြားခွင့်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည့်အပြင် ဆရာတော်ကြီးများ၏တရားပွဲနှင့်အလှူရှင်များ၏အဟာရဒါနလှူဒါန်းကျွေးမွေးမှုများကိုပါ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။ယခုအခါ အကျဉ်းထောင်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ စာရေးဆရာများ၏အသိပညာပေးစာပေဟောပြောပွဲများကိုပါ ကျင်းပပေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဝါးအ​ခြေခံလက်​မှုထည်​နှင့်​ ပဲစဉ်းငုံတန်​ဖိုးမြှင့်​ စား​သောက်​ကုန်​နည်းပညာသင်တန်းမျာ?
ရဲစခန်း ၃၀ တိုက်ခိုက်ခံရစဉ် ကျဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ရည်စူးကုသိုလ်ပြု?
ရေးမြို့နယ်တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့မှုကြောင့် မြို့၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းရေမြုပ်ပြီး အိမ်ခြေ ၃၀ဝကျော် ပျက်စီးခဲ့
မိုဗစ် ကိုခေါ်မည့် သတင်းများအား ဂလက်ဆီ ပယ်ချ
နယ်စပ်ခိုလှုံ ရွှေ့ပြောင်းသူများအရေး ဟန့်တားနိုင်ရန် မက္ကဆီကို သွင်းကုန်များပေါ်တွင် အမေရိကန?